Mayelana ne-Tekna Hyperbaric - I-Hyperbaric Therapy HBOT
Mayelana ne-Tekna Hyperbaric
Ikhaya/Mayelana ne-Tekna Hyperbaric
Mayelana ne-Tekna Hyperbarictekna_mod2018-01-04T17:19:53+00:00
Mayelana ne-Tekna Hyperbaric Chambers
I-Tekna yiMenzi oPhambili weMonoplace ne-Multiplace Hyperbaric Chambers.
I-Tekna inikeza ukuthengisa, isevisi, nokuqeqeshwa ku-Hyperbaric Therapy Oxygen. [HBOT]
I-Tekna iyinhlangano ephelele ye-Opergenic Oxygen Therapy Chamber OEM.
I-Tekna inomnyango we-3D CAD / CAM / FEA Engineering, kanye ne-ASME / PVHO Shop Press Factory Shop, noMnyango wePaint and Finishes. Sibheka amapuleti ezinsimbi zensimbi zibe yizikebhe eziphelile.
Ebhizinisini kusukela ku-1989, abasunguli be-TEKNA bahileleke nabo imithi yokudoba kusukela i-1973 nomuthi we-hyperbaric kusukela ku-1976.
Uhlelo lwethu lwe-Class A Multiplace ne-Class B Monoplace HBOT lube ngu-FDA 510 (k) olususwe kusukela ku-12 / 07 / 2000 futhi yonke imikhumbi yethu yokucindezela i-ASME, i-National Board, ne-NFPA-99 ne-PVHO-1. Izinhlelo zethu zeklasi C ziyi-ASME ne-NFPA ehambisana ne-addenda yakamuva.
Inzuzo ekhethekile yokuthenga nge-TEKNA yilokho singu-OEM kuphela okhiqiza amaphakheji emoyeni angokwezifiso (angabhalisiwe) aklanyelwe ngqo i-HBOT.
Ezinye izinzuzo zihlanganisa: imiklamo yenkambiso, ukulethwa nokufakwa emhlabeni wonke, ukuqeqeshwa komsebenzi, kanye nokunye kwezinhlelo zokuqeqesha nokubonisana.
I-TEKNA inikeza i-POCD (iphuzu lemidwebo yokuxhumanisa), ngakho-ke ungaba nekontrakta yakho ukwakha ikamelo elilungele ikamelo, futhi sizokusiza uthole intengo engcono kakhulu emipayipi yegesi kanye ne-grade grade ye-oxygen.
Ama-FSS ethu (amasistimu okunciphisa umlilo) afaka izikhukhula ze-vinyl eline-epoxy kanye nemikhumbi yezandla zokuqeda ukugqwala.
I-TEKNA izokwenza isondlo sakho sonyaka jikelele kanye nokuhlelwa kabusha kwezinga elifanele.
Sibheke phambili ukusebenza nawe.
AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandIziqhingi zaseCocosColombiaComorosI-Congo, iDemocratic Republic of theI-Congo, i-Republic of theCook IslandsCosta RicaCôte d'IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusI-Czech RepublicDenmarkDjiboutiDominicai-Dominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatini (Swaziland)EthiopiaFalkland Is